Ukuqala iphrojekthi ngeGit neGoogle Code (Ingxenye IV) | Kusuka kuLinux
Ukuqala iphrojekthi ngeGit neGoogle Code (Ingxenye IV)
Ekugcineni, okuwukuphela kwento esazobonakala ukuthi ungabhalisa kanjani izinguquko ezilandelanayo entuthukweni yethu.
1 9. Ukubhalisa izinguquko
2 10. Ukubukeza umlando wethu
9. Ukubhalisa izinguquko
Sizokwenza ushintsho kufayela lekhodi yomthombo. Okokuqala sizokwengeza umugqa ojwayelekile wezindawo * nix ngemibhalo bese sizokwenza umlayezo onentshisekelo ethe xaxa. Kulokhu sikwenza ngesihleli sombhalo.
Uma sisebenzisa umyalo isib isimo Lokhu kuzosazisa ukuthi kube nezinguquko nokuthi kumele senze okusha yenza ukuzibhalisa. Ngakho-ke senza:
~ / HelloWorld $ git commit -a -m "Ukungeza umlayezo onomdlandla ongaphezulu"
Ngokukhethwa kukho -m sidlulisa umbhalo we yenza ngakho-ke ngeke kuvule isihleli sombhalo, kuyindlela esheshayo yokwenza ifayela le- yenza lapho izinguquko ziningi futhi akunangqondo ukuvula umhleli ukuze achaze umugqa owodwa.
Lapho siqala iphrojekthi yethu ku I-Google Code, sathola ukuthi izoba nelayisense I-GPL v3, ithi isoftware kufanele isatshalaliswe nekhophi lefayela lelayisense. Kungakho sikwazi ukuxhuma kusayithi le- I-GNU bese ulanda.
Manje njengoba sesinefayela lelayisense sesingangeza kuphrojekthi yethu. Mane ngokuyilahla enkombeni esebenzayo. Uma sisebenzisa a isib isimo, Izosazisa ukuthi kube nezinguquko kepha lelo fayela okukhulunywa ngalo alikhonazilandelwe»(Uma ngingahle ngisebenzise leli gama).
Ukuze ushintsho lubonakale enqolobaneni yethu, kufanele siyengeze ngempumelelo sisebenzisa umyalo git engeza.
~ / HelloWorld $ git engeza LICENSE.txt
Uma sigijima futhi isib isimo lokhu kuzosazisa ukuthi kufakwe ifayili elisha. Ekugcineni sisebenzisa a yenza ukusungula inguqulo entsha futhi ekugcineni singakwazi ukulayisha isimo samanje segumbi lethu lasendaweni yokugcina ekude ebanjelwe kuyo I-Google Code.
~ / HelloWorld $ git commit -a -m "Ingeza ifayili lelayisense le-GPL v3" ~ / HelloWorld $ git Push gc master
10. Ukubukeza umlando wethu
Uma sixhuma endaweni yokugcina yephrojekthi yethu ku I-Google Code singabona esigabeni Umthombo esigabeni Izinguquko izinhlobo ezahlukahlukene ebesizisebenzisa ekukhuleni kwethu.
Ungabona okugcinwe ekhelini: http://code.google.com/p/lecovi-hello-world/source/browse/
Njengoba uzobona, ilula futhi iyithuluzi eliwusizo kakhulu. Ngiyethemba uyithandile, ikusizile futhi ngilinde ukuphawula kwakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukuqala iphrojekthi ngeGit neGoogle Code (Ingxenye IV)
Siyabonga ngalolu chungechunge lwezihloko ezithakazelisayo !!
Ngabe kukhona isizathu esikhethekile sokusebenzisa iGoogle Code esikhundleni seGithub esibonakala saziwa kakhulu? Ngikucela kokungazi okukhulu kwe-XD
Hhayi nje ukuthi kubonakala kulula kakhulu kimi futhi ngicabanga ukuthi abantu abaningi sebenayo vele i-akhawunti yakwa-Google, ungathola isevisi ngokuya nje kusayithi ye-Google Code.
IGitHub iyithuluzi elihle, kepha ukuba nezinketho eziningi zokumisa kwesinye isikhathi kukwenza kube nzima kakhulu ku-newbie.
Ngilungiselela izitolimende lapho ngisebenza khona kancane neGitHub neBitbucket, ngethula iMercurial ne-hg-git.
IGyazo, uhlelo lokuthwebula isikrini bese ulilengisa ngokuzenzakalela kuwebhu